Yakavhurwa Music Sites (2020) - Teerera Mimhanzi Kwose - Varaidzo
Vhura Mimhanzi Sites 2020 - Teerera Mimhanzi Chero kupi
Mimhanzi yakafanana nemushonga uye zvakare ndiwo mushonga wakanakisa watati tamboita sezvo uine simba rakakura pahupenyu hwedu.Isu tese tinofarira kunzwa mimhanzi mune ese mamiriro. Ngazvive izvo patinenge tichifara, takasuruvara kana takamanikidzwa. Tinoda chimwe chinhu chine chekuita nacho uye zvakare zvinobatsira kushandura manzwiro edu futi.
Mazuva ano kune akawanda matekinoroji matsva zvekuti isu tave kukwanisa kuwana online mimhanzi zvakare. Uine mawebhusaiti mazhinji anopa mimhanzi yepamhepo, unogona ikozvino kuteerera mimhanzi yako yaunofarira chero kupi.Kune akati wandei asina kuvhurwa masayiti emimhanzi kwaunogona kuteerera kumimhanzi.
Icho chokwadi ndechekuti nekuda kwezvimwe zvikonzero, mazhinji ezvikoro kana makoreji anovharira mamwe masayiti, zvese nekuda kwekuwanikwa kwezvimwe zvemhirizhonga zvemukati kana chero chinhu. Nekudaro, iwo masosi ari kuwanikwa anozivikanwa seisina kuvhurwa mawebhusaiti emimhanzi Aya masaiti ari nyore kwazvo kutsvaga uye zvakare mahara kurodha pasi.
6 Yakanyanya VPN yeNetflix
Yakanakisa Akasunungurwa Mimhanzi Sites 2020:
Pano tinonyora iwe mamwe epamusoro asina kuvhurwa masayiti emimhanzi:
MuPureVolume, unogona kunyatso tsvaga mimhanzi yema genre ese ayo anosanganisira mamwe ekare matraki akabata mamirioni emoyo yevanhu.PureVolume inogara iri yemazuva ano uye ine mimhanzi inozivikanwa kwazvo nguva dzese. Iwe unogona zvakare kukwanisa kutsvaga mimhanzi yako yaunofarira, maalbum kana kunyange maartist uye kunyange zviitiko zvakare.
PureVolume ndeye isina kuvhurwa mimhanzi saiti iyo inogona kuwanikwa kubva chero nzvimbo. Hazvinei kuti uripi. Nekudaro, kana iwe uri kutsvaga imwe mimhanzi yemhando ipi neipi yekupemberera kana mapato, saka rega ndikuudze kuti uri pachikuva chaicho sezvo PureVolume ichakupa nemhando dzese dzemimhanzi zvichibva pane zvaunofarira uye zvaunofarira.
GrooveShark yakaita seimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzemimhanzi dzisina kuvhurwa.Iyo inozivikanwa webhusaiti yekuteerera kune chero emahara mimhanzi pasina kukosha kwekusaina. Inoshandiswa muzvikoro, kukoreji, uye kunyangwe nzvimbo dzebasa.Iine zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinopihwa nenzvimbo kune vashandisi vayo. Zvimwe zvezvinhu zvinosanganisira kutsvaga rwiyo kana muimbi.
Vashandisi vayo vanogona zvakare kurodha nziyo chero yavanoda. Nekudaro, ivo vanogona kuiteerera gare gare kana ivo vasiri pamhepo zvakare.Chandinofarira zvakanyanya pamusoro peGrooveShark ndechekuti zvinokupa mukana wekusununguka kune akasarudzika maAlbum albums. Nekudaro, pano iwe unogona kana kuwana izvo zvazvino matraki ari kutenderera kana maalbhamu, mavhidhiyo uye chero anouya nziyo pawebhusaiti yavo.
Iwe unogona chaizvo kugadzira runyorwa rwewe pachako newebsite ino uye unogona zvakare kutsvaga nekutamba nziyo dzako dzaunofarira mumatanho ari nyore. Maitiro ekushandisa saiti iri nyore uye nyore. Zvese zvaunoda kuti uite, unongofanirwa kushanyira saiti uye nyora chero rwiyo kana muimbi wauri kutsvaga wotanga kuuteerera.
Kana iwe uchifarira kurodha pasi mimhanzi ingo tinya pazita renyimbo uye uchaona bhatani rekutora.Saka, kana iwe uchitsvaga webhusaiti ine hombe muunganidzwa wemimhanzi, unofanirwa kushanyira ino saiti.
Ino isina kuvhurwa mimhanzi saiti ndeye yemahara internet radio saiti iyo inoyerera dzakawanda dzenziyo dzinonakidza uye nzira zvakare kupindwa muropa. Kune mamirioni enziyo dziripo paSlacker.Saiti iyi zvakare yakapusa kushandisa. Iwe unogona chete kungoshanyira peji ravo rekutanga uye uone runyorwa rwemahara maredhiyo kutenderera maredhiyo kubva.
Vanhu vanofunga Slacker Radio seimwe yeakanakisa mapuratifomu ekuyerera mimhanzi kubva zvinoenderana nemhinduro uye ratings.Saka, zvakanyanya ivo vanopa kunyoreswa kwakabhadharwa. Asi, iyo yemahara account inopihwawo neimwe yakaganhurirwa nhamba yeinternet redhiyo kune emahara vashandisi zvakare.
Kana iwe uchida kuteerera kune chero mimhanzi, ingo ita shuwa kuti iwe unosarudza iyo genre mhando, iyo inokuratidza iwe rumwe runyorwa.Tsananguro dzerimwe mimhanzi dzinoonekwa nemufananidzo wemufananidzo.Zvino, zvese zvaunoda kuti uite, ingotinya pane bhatani reKutamba kuti utange kutenderera.
Iyi webhusaiti chigadzirwa cheGoogle uye nekudaro haina kuvharirwa chero chikoro kana koreji kana chero nzvimbo yebasa. Kutendeseka kutaura, izvi zvakafanana neimwe yandinofarira mawebhusaiti kuteerera mimhanzi.Pano unogona kuwana dzinenge dzese nziyo. Kune akawanda maalbum anowanikwa pane ino Google mumhanzi zvakare.Heino sarudzo yekubhadhara yakabhadharwa iyo inotanga kubva ku $ 99.99 pamwedzi.
Mune kunyorera uku, zvinokutendera iwe kubvisa izvo zvisingadiwe kushambadza uye kuvhura zvimwe zvinoshamisira maficha.Asi kune vamwe vashandisi, vasingade kuenda kunyoreswa kwakabhadharwa, kunyoreswa kwemahara kunowanikwa pamwe nekunakidzwa nenziyo yemahara.
Ivo zvakare vane yavo yega yemahara app iyo iyo vashandisi vanogona kushandisa kune inokurumidza uye zvirinani ruzivo. Asi, kana iwe wajairira webhu vhezheni saka izvo zvakanyatsonaka uye unogona kuenderera uchishandisa iyo webhu vhezheni.Zvakare, kuti uwane Google Music, unofanirwa kuona kuti wave neakaunti yeGoogle nekuti ichave yakabatana neakaunti yako yeGoogle.
Soundzabound ine dzakasiyana siyana dzemimhanzi yemahara muraibhurari yayo yakakura.Icho chokwadi ndechekuti webhusaiti ino yakavakirwa zvinangwa zvekudzidzisa, saka, ive shuwa kuti saiti iyi haina chero chinhu chisiri pamutemo. Kune mimhanzi isingabhadharwe yeRoyalty iyo inoita kuti vashandisi vayo kana vadzidzi vashandise izvo zvebasa ravo rekudzidzisa uye zvakare kuzvivaraidza.
Nekudaro, iwe unogona kuve wakasununguka kana iwe uchishanyira ino saiti Soundzabound uye pachena kuteerera kune chero chaunoda.
TuneIn inopa muunganidzwa wakakura wenziyo dzemhando dzese kune vashandisi vayo. Icho chaicho chakasanganiswa freemium sevhisi iyo inopa zvese zvemahara uye zvakabhadharwa vhezheni zvewebhusaiti kune vese vashandisi.Iwe unogona kunyange kuvhura zvimwe maficha eisina kuvhurwa mimhanzi webhusaiti nekuenda kunabhadharwa kunyoreswa. Asi, izvo hazvisi zvekumanikidza. Unogona kunakirwa nebasa ravo remahara futi. Izvo zvose zviri kwauri.
Vashandisi varo vemahara havadi chero mhando yekusaina uye ndicho chinhu chinonyanya kushamisa nezve ino webhusaiti. Ivo zvakare vanopa redhiyo sevhisi nenziyo pawebhusaiti yavo.Ivo zvakare vane internet redhiyo inova yakasimbiswa ficha.Kune akawanda matunhu nemitauro. Ingosarudza dunhu rauri uye iwe unowana akawanda mazano kubva kune webhusaiti.
Kana zvasvika pamimhanzi, ziva kuti muunganidzwa wavo muhombe kwazvo.Ivo vane yavo yega app. Nekudaro, kana iwe usiri kuda kurodha pasi purogiramu kuti uteerere kumimhanzi, unogona kusarudza wakasununguka kushanyira webhusaiti uye kuishandisa. Vashandisi vanopihwa yakakura uye yakazara inoratidzwa midhiya controller.
Saavn inowanikwa neReliance Maindasitiri uye iri kutowanikwa pasirese.Saavn ndeye Indian mumhanzi webhusaiti. Asi, haina chete kupa Bollywood nziyo asi nziyo kubva kumativi ese epasi.Chikamu chinoshamisa nezve Saavn ndechekuti ivo vanopa iyo Radhiyo kune vashandisi zvakare.
Ngatitii, kana iwe uchitsvaga dzimwe nziyo dzebhendi, iwe unowana rondedzero yenziyo dzavo dzese dzinowanikwa pane ino saiti. Zvakanaka, kwete nziyo dzavo chete. Asi, zvakare yepamutemo Radio chiteshi inogona kushandiswa zvakasununguka pa Saavn webhusaiti.
Kuti utange neAccuRadio, hapana chero chikonzero chekugadzira account pawebhusaiti kuti uterere nziyo uye maalbum.Zvese zvaunoda kuti uite, ingo shanyira webhusaiti uye tinya pane chero redhiyo chiteshi iyo inowanikwa kuti unakirwe nayo zvizere.
AccuRadio zvakare inokupa iwe yemahara internet Radio nematoni ezviteshi zvirimo mairi.Nziyo dzese dzino ridzwa paAccuRadio chiteshi dzinozivikanwa uye iwe unofara kuuteerera. Iwe unowanawo kusarudza kubva pamhando dzakasiyana uye wobva wangotanga kutamba chiteshi chaunofarira.
Unogona kusarudza zvakasununguka chero chiteshi cheRadio icho chiripo pane runyorwa rwezviuru zvezviteshi uye wotanga kuteerera kune chero mimhanzi sekuda kwako.Iwe unoziva chokwadi chekuti vazhinji vedu tinosarudza kuteerera kunhepfenyuro dzepamhepo online nekuti nenzira iyoyo zvinowanzoita zvekare kuteerera nziyo.
Zvakare, kune akasiyana mawebhusaiti makanda aripo. Nekudaro, iwe haufanire kushandisa yakafanana yekare, yakarongeka yekutarisa dhizaini nguva dzese.Nekudaro, Kana iwe uchitsvaga isina kuvhurwa mimhanzi saiti, Saavn ichave yakanaka sarudzo kwauri.Chikonzero chiri shure kweichi ndechekuti inokupa iwe nenziyo uye online radio zvakare.
Hunhu hwemimhanzi hwaunowana hwakanyatsonaka nenziyo dzakasiyana siyana dziripo.Ivo zvakare vane yavo app iyo inowanikwa pane Android uye iOS zvese.Ivo zvakare ndeimwe yeanonyanyo shandiswa Bollywood mimhanzi vagoveri.
Nekudaro, aya ndiwo mamwe emawebhusaiti emimhanzi asina kuvhurwa. Kune vamwe vazhinji futi. Iwe unogona kushandisa zviri nyore izvi kuti uwane mukana wematani emumhanzi online kana chiteshi redhiyo futi. Unofanirwa kuramba uchitsvaga nzvimbo dzepachena kuti uteerere mimhanzi yako yaunofarira sezvo mawebhusaiti atakanyora pamusoro aine marudzi akasiyana enziyo anowanikwa nawo. Mazhinji emasaiti aya anozivikanwa kwazvo uye anoshandiswa nevazhinji vashandisi. Tinovimba unonakidzwa nazvo.
iPhone 12 Muenzaniso Nhamba (A2172, A2402, A2403, A2404)
YouTube Yepasi Pasi? Tarisa Urarame Mamiriro Izvozvi
misa izvozvi uwane rumwe rubatsiro roblox id
tarisa emahara mafirimu matsva pamhepo pasina kurodha pasi kana kusaina
maitiro ekuona youtube vhidhiyo yakavharirwa munyika yangu
ndeapi mawebhusaiti anotendera iwe kuti uone terevhizheni mahara